Holand iyo Taariikhda ee ku dhigtay Spain (Daawo Sawiro)
Saturday June 14, 2014 - 00:37:07 in Sports by Web Admin
Qeybti Hore ee Ciyaarta: Spain iyo Netherland ayaa soo bandhigay kulan uqalmay furitaanka koobka adduunka, iyadoo ay yaraayeen qaladaadkii maamulayaasha ciyaarta, qeybtii hore ee ciyaarta ayaa aheyd mid lagu wada raaxeystay, iyadoo kubad isku dheelit
Qeybti Hore ee Ciyaarta: Spain iyo Netherland ayaa soo bandhigay kulan uqalmay furitaanka koobka adduunka, iyadoo ay yaraayeen qaladaadkii maamulayaasha ciyaarta, qeybtii hore ee ciyaarta ayaa aheyd mid lagu wada raaxeystay, iyadoo kubad isku dheelitiran ay soo bandhigeen labada dhinac.
Fursaddii ugu horeysayba waxaa heshay Netherland, Wesley Snieder ayaa kabeerdareeyay fursad dahabi aheyd, isagoo kubad loosoo dhexdusiyey aan umaamulin sidii ay laheyd, laadkii uu shabaqa la aaday waxaa kabeeniyey Casillas, oo si degan usugayey halka Wesley uu kubada dhigi karay.
Diego Costa ayaa lagu abaalmariyey rigoore uu kuraadiyey Stefan De Vrij, daafaca Netherland ayaa qalad kugalay weeraryahanka Spain oo isku dayey inuu uganbiyo Vrij oo xawaare kusoo sibixday, waxaana rigooradaas usoo istaagay shabaqana kuhubsaday Xabi alonso.
Fursaddi la arkay ee kusoo xigtay David Silva ayaan nasiib uyeelan in magaciisa lagu qoro goolka labaad ee ciyaarta, kubad dhex-bixis aheyd oo cajiib ah uu kahelay Adres Iniest ayuu karogay inuu ubaaso Diego Costa oo aysan cidna xiranin, kubad sameeyaha Manchester City ayaa isku dayey inuu maareeyo fursaddaan, kadulqaadkii uu isku dayeyse waxaa beeniyey goolhayeha Netherland Cillessen.
Fursaddii kuxigtay isla qeybtii hore ee ciyaarta waxaa heshay Netherland, karoos macaan oo loosoo dhigay weeraryahanka Manchester United, Robben Van Persie ayaa dhankiisa si il-qabad leh udhameestiray, Cassilas, Pique ayaa xaadir ka ahaay, RVP ayaa kubada shabaqa kuleexiyey isagoo hawada kujiro, kubada ayaana shabaqa gees kagashay Casillar oo isnuuxinin.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay barbaro lagu wada qanacsan yahay, iyadoo haldaqiiqo oo lagu daray aysan wax kabadalin natiijadii ciyaarta.
Qeybtii labaad ee ciyaarta, Netherland ayaa isku dayeysay inay kubada iyo kulankaba laqeybsato Spain, kooxda koobka adduunka ayaa ceyrsaneysay inay kubada kareebto ciyaartoyda Holland oo si wacan uqeybsanayey kubada.
Fursaddii ugu horeesay qeybtii labaad ee ciyaarta waxaa helay xulka qaranka Netherland, kubad loosoo qaaday gureylaha bidaarta leh ayaa si layaableh ukoontarooley isagoo kaleexsaday daafaca reer Spain casillasna kuyiri walle kuguma cuno markaan.
Isla fursaddi kuxigtay Netherland oo umuuqatay inay carcar kusoo gashayba qeybtii labaad ee ciyaarta, RVP ayaa markale usoo dhawaaday inuu hogaanka usii dheereeyo kooxda reer Europe, kubadii uu la aaday shabaqa waxaa kabeenisay birta.
Netherland ayaa cashirkeeda meesha kasii wadatay, qalad uusameeyay goolhayeha Spain Casillas daafaca xulka Orange Stefan Di Vrij ayaa kubada kuhubsaday shabaqa, kubad lasoo qaaday Casillasna uu shabaqa soo firaaqeeyay, qaladkaan ayaa ek midkii Casillas uu sameeyay kulankii Finalka Champions League, goolkii Atletico Madrid.
Bandhiga Oranges ayaa sii socday, halka qaladaadka Casillas ay meesheedii kasii socday, goolhayeha Real Madrid ayaa qalad kuhor sameeyay RVP, isagoo sahalsaday kubad loosoo dhigay uusii taraarixay, kubada ayaa utagtay weeraryahanka ka xamaasho horyaalka England, isagoo kubada usii raaciyey dhanka shabaqa.
Orages ayaa isku dhaarsaday aargoosi lama ilaawaan ah oo ay kudhigaan Spain, Arjen Robben ayaa meel cidla uga tagay Casillas, kubad uu dhexda kasoo qaatay ayuu goolhayeha reer Spain kusoo baxay, ciyaaryahanka garabka ee Netherland ayaa uganbiyey shabaqa oo ay kujireen Ramos iyo Pique dhex dhigay kubada.
Wacdaraha Netherland ayaa sii socday, ciyaartoyda Oranges ayaa wadooyin lix mitir ah kafurtay khadka difaacyada Spain, markale ayeysan nasiib uyeelan inay ciyaarta kadhigaay lix, kadib markii fursad ay kabeenisay birta.
Waxaase kasii badnaa inta fursadood uu badbaadiyey Casillas, afar daqiiqo oo lagu daray intii lagu gudo jiray Fernando Torres ayaa Spain kacunay fursad ay kusoo yareen laheyd goolasha lagu leeyahay, ciyaarta ayaana kusoo dhamaatay 5-1 oo Netherland uga aargudatay Spain.
13/05/2021 - 11:39:57